Infographic: Misy paikady vaovao hiseho amin'ny fitomboan'ny fivarotana antsinjarany amin'ny Google Ads | Martech Zone
Talata, Martsa 31, 2020 Talata, Martsa 31, 2020 Douglas Karr
Tamin'ny fandalinana fahefatra nataony momba ny zava-bitan'ny indostrian'ny mpivarotra amin'ny Google Ads, Sidecar mamporisika ireo mpivarotra e-varotra handinika indray ny paikadin'izy ireo ary hahita ny toerana fotsy. Ny orinasa dia namoaka ny fikarohana tao aminy Tatitra momba ny benchmark 2020: Google Ads amin'ny antsinjarany, fanadihadiana feno momba ny zava-bitan'ny sehatry ny antsinjarany ao amin'ny Google Ads.
Ny valin'ny sidecar dia manondro lesona manan-danja ho an'ireo mpivarotra am-bidy hodinihina mandritra ny taona 2020, indrindra eo afovoan'ny tontolo iainana namorona ny COVID-19. Ny taona 2019 dia nifaninana kokoa noho ny teo aloha, kanefa ny mpivarotra dia afaka nihazona tamim-pahombiazana ny vola niditra tamin'ny fampifanarahana ny toetr'andro, nifantoka tamin'ny paikadin'ny mpihaino azy ireo, ary nanao ny laharam-pahamehana ny fitomboana mitombo, mifanohitra amin'ny fiakarana goavana. Io hozatra mampifanaraka io no lakilen'ny fitazonana ny fivezivezena sy ny fanohanana ny mpanjifa mandritra io vanim-potoana io.
Mike Farrell, Talen'ny Senior Strategy an'ny Integrated Digital Strategy ao Sidecar
Antoka lehibe amin'ny fahombiazan'ny doka Google Retail:
Sidecar dia nahita ireto antony manaraka ireto izay nisy fiatraikany tamin'ny fahombiazan'ny mpivarotra tamin'ny taona 2019:
Fanovana teti-bola - Ny mpivarotra dia nanitsy ny fandaniana Google Ads tamin'ny taona 2019, nanao laharam-pahamehana ny hetsika ambany fantsona ambany amin'ny Google Shopping ary namerina namerina ny fampielezan-kevitr'izy ireo karama fitadiavana vola.
Laharam-pahamehana amin'ny fahombiazana - Ny mpivarotra dia nanantitrantitra ny fahombiazan'ny fikarohana karama, amin'ny ampahany amin'ny fampiasam-bola amin'ny doka finday tsy dia lafo, mitarika fidiram-bola mitovy amin'izany isan-taona.
Fifaninanana avy any Amazon - Ity fifaninanana ity dia nampidina ny tahan'ny fiovam-po an'ny Google Shopping manerana ny fitaovana, manery ny mpivarotra hanatsara ny fandaniana hitazonana ny fitomboan'ny vola miditra.
Fanamafisana ny paikadin'ny mpihaino - Nanitatra ny fifantohany tamin'ny mpihaino granular marobe ny mpivarotra mba hamaritana tsara kokoa ny Google Ads amin'ny dingana rehetra amin'ny fantsona fividianana.
Fifantohana tsy miovaova ao amin'ny Google - Ny mpivarotra dia nitazona ny vola azo tamin'ny sehatra Google Ads efa ela, ary mitady tombony fanampiny amin'ny alàlan'ny sehatra dokambarotra vaovao, toa an'i Amazon sy Pinterest.
Raha mijery mialoha, Google dia azo antoka fa hanohy hamolavola ny sehatra Google Ads mba hifaninana amin'ireo sehatra varotra mihombo sy mifaninana toa ny Facebook, Instagram, ary Amazon.
Zava-dehibe hita ao amin'ny benchmark Google Ads Retail:
Niatrika fanamby nifaninana ny mpivarotra. Ireo mpivarotra antsinjarany dia nitombo fahombiazana tamin'ny fikarohana karama, nitahiry 8% amin'ny vidiny isan-taona, sady mitondra karama mitovy amin'izany. Ireo mpivarotra an-tsena dia afaka nibata ny fidiram-bolan'i Google Shopping tamin'ny 7% tamin'ny fampitomboana 7% ny fandaniana.
Niova ny fandaniam-bola amin'ny mpivarotra. Google Shopping dia nahatratra 80% ny teti-bolan'ny mpivarotra teo anelanelan'ny fantsona roa ireo, satria mitana andraikitra lehibe eo amin'ny famadihana ireo mpividy amin'ny fantsona ambany. Raha toa ny karama 20% sisa tavela amin'ny fikarohana, ny mpivarotra dia manantona ireo doka ireo miaraka amina granularité lehibe kokoa hahasarika ny mpividy any an-tampon'ny fantsona.
Ny anjaran'ny fahatsapana Google Shopping an'i Amazon dia nahatratra 60% ho an'ny B2B, trano sy trano ary mpivarotra marobe amin'ny Q3 2019. Ny anjaran'i Amazon dia nihena kely tao amin'ny Q4, namela ny mpivarotra hamerina ny fipoahana mandritra ny fotoan-tsarotra amin'ny taona.
Ny anjaran'i Amazon dia nihetsika kely tamin'ny fikarohana karama tamin'ny taona 2019, manodidina ny 40% na ambany kokoa ho an'ireo mpivarotra rehetra voadinika. Ireo mpivarotra ambongadiny eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny hatsaran-tarehy ary ny trano sy ny trano dia nahita ny fihenan'ny fiheverana an'i Amazon teo amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 isan-jato isan-jato nandritra ny taona 2019. Asehon'ireo valim-pikarohana ireo fa ny fikarohana karama dia mety ho fitaovana sarobidy ho an'ireo mpivarotra am-barotra hiatrehana an'i Amazon sy ireo mpifaninana hafa. fanatrehana ny SERP karama.
Ny Prime Day dia manolotra tombony vaovao ho an'ny mpivarotra amin'ny Google Ads. Ny fitomboan'ny taona isan-taona dia nanatri-maso ny fahatsapana sy ny fidiram-bola manerana ny fitaovana nandritra ny herinandro feno ny Andro Andro amin'ny Google Shopping. Ho an'ny doka fiantsenana amin'ny finday dia nisy fitomboana mandavantaona manerana ny KPI manan-danja (4% ho an'ny baiko, 6% ho an'ny tsindry, ary 13% ho an'ny vola miditra). Fanampin'izany, ny doka finday karoka dia nahitana tombony be tamin'ny fiakarana 25% amin'ny baiko ary 28% amin'ny vola miditra isan-taona.
Midira amin'ny tatitra feno ary azonao atao ny mahazo KPI amin'ny tsipika fivarotanao manokana, ao anatin'izany ny fironana lehibe miantraika amin'ny tontolon'ny mpivarotra miaraka amin'ny tolo-kevitr'i Sidecar.
Sintomy ny tatitra momba ny benchmark an'ny Sidecar's 2020
Momba an'i Sidecar
Sidecar dia manolotra fahombiazana amin'ny marketing amin'ny fahombiazan'ny mpivarotra sy ny marika. Ny haitao mandroso sy ny angon-drakitra an-tsokosoko an'ny Sidecar, ampiarahina amin'ny fahaizana am-barotra mandritra ny taona maro, dia manampy ny mpanjifany hamaha ny fahafaha-manao ny fantsona fikarohana, fiantsenana, sosialy ary tsena matanjaka indrindra ankehitriny.
Tags: 2020Amazondoka amin'ny akanjobenchmark infographictatitra momba ny benchmarkdoka amin'ny solosainaCovid-19tatitra fampidinanadoka fanomezanadoka googledoka google amin'ny antsinjaranygoogle adwordsgoogle shoppingdokambarotra fialambolydoka findayfikarohana karamaPDFdokambarotra momba ny trano sy tanytatitra momba ny benchmarkdokambarotra google antsinjarany